सिन्धुली खुर्कोटकी इन्सपेक्टर शान्ता वाइबाको लोभलाग्दो काम ! सयौ मजदुरको उद्दार – Enepali News
सिन्धुली खुर्कोटकी इन्सपेक्टर शान्ता वाइबाको लोभलाग्दो काम ! सयौ मजदुरको उद्दार
April 18, 2020 1644
सिन्धुली ,५बैशाख – “साप! फेरि ५०/६० जना जम्मा भइसके, के गरौं ?” इलाका प्रहरी कार्यालय खुर्कोटकी इन्चार्ज प्रहरी इन्सपेक्टर शान्ता वाइबालाई मातहतको नेपालथोकबाट फोन आयो । बिहीवार दिउँसो २ बजे यो फोन आउँदा वाइबा भर्खरै खाना खाएर कार्यकक्षमा प्रवेश गर्नु भएको थियो । “पख एकछिन, म गाउँपालिका अध्यक्षलाई फोन गर्छु , त्यतिञ्जेल उनीहरूको ज्वरो नाप्दै गर,” वाइबाले जवाफ फर्काउनु भयो ।
त्यसपछि उहाँले सुनकोशी गाउँपालिका अध्यक्ष दीपा बोहरा दाहाललाई फोन गर्नु भयो । गाउँपालिका अध्यक्ष दाहालको मोबाइल स्वीच अफ छ ।लगत्तै तिनै गाउँपालिका अध्यक्षका पति प्रदेश सांसद राजन दाहाललाई फोन गर्नु भयो । “माननीयज्यू, अध्यक्षज्यूको त फोन अफ रहेछ, नेपालथोकमा फेरि ५०/६० जना जम्मा भएछन, के गर्ने होला ?
आफ्नो क्षेत्रमा अलपत्र परेका पैदलयात्रुलाई उद्धार गरिरहेका दाहालले भन्नुभयो, “त्यता आउने जे–जे भेटिन्छन, त्यसैमा राखेर खुर्कोटसम्म पठाइदिन्छौं । त्यसपछि समन्वयय गर्नुहोला ।”
वाइबाले फेरि गोलन्जोर गाउँपालिकाका अध्यक्षलाई फोन गर्नु भयो ।
“अध्यक्षज्यू फेरि ५०/६० जना आउँदै रहेछन् के गर्ने होला ?” गाउँपालिका अध्यक्षले जवाफ फर्काउनु भयो, “गाउँपालिकाको गाडी त्यतै होला । समन्वय गरेर पठाइदिनुस् न इन्सपेक्टर साप ।”
काठमाडौंबाट ८० किलोमिर पैदल हिडेर नेपालकोथ पुगेका पैदलयात्रुलाई त्यहाँबाट प्रहरीले तीनवटा ट्रकमा खुर्कोटसम्म पठाइदियो ।
सुनसरी जाने गाडीमा चढेका ओखलढुंगा, खोटाङ र घुर्मीतिर जाने यात्रु त्यहीँ ओर्ले । सप्तरी सिराहा, महोत्तरी जाने यात्रुलाई तरकारी बोकेर आएको को१ख ८९४० नम्बरको ट्रकमा चढाएर पठाइ दिनु भयो वाइबाले ।
“कसैले स्वेच्छाले दिएछन् भन्नुभयो ठीकै छ, नत्र उनीहरूसँग भाडा नलिनुहोला । सबै मजदूर हुन, भोकभोकै छन,” इन्सपेक्टर वाइबाले ड्राइभरलाई सम्झाउनु भयो ।
“गाडी नरोकी तपाईंहरू कोही पनि नओर्लिनु होला । कहाँ– कहाँ ओर्लने हो हामीले अगाडि ड्राइभरलाई भनेका छौं,” उहाँले यात्रुलाई सम्झाउनु भयो ।
“उनीहरूलाई पुग्नेजति पानी र बिस्कुट देऊ” उहाँले प्रहरी हवल्दारलाई निर्देशन दिनु भयो ।
यो दृष्य विहीवार दिउँसो साढे ३ बजेतिर सिन्धुलीको खुर्कोट बजारको हो । लकडाउनका कारण सर्वसाधारण मजदुर पैदलै हिँडेर तराइ झर्ने क्रम ह्वात्तै बढेपछि उनीहरूको व्यवस्थापनको व्यस्तताले गर्दा वाइबालाई खाना खाने समय निकाल्न पनि गाह्रो परेको रहेछ ।
लकडाउन शुरू भएपछिका हरेक दिन राजमार्गमा थाकेर ढलेका, गलेका, भोकभोकै रहेका यात्रुको व्यवस्थापनमै वाइबाको समय बितेको छ । उनी हरेक दिन यसैगरी स्थानीय गाउँपालिकासँग समन्वय, गाडीको जोहो र पैदल यात्रुको उद्धारमा व्यस्त हुनु हुन्छ ।
“लकडाउन थपिएको भोलिपल्ट यस्तै भीड लाग्छ । आज अलि नै धेरै पैदल यात्रु आएछन,” वाइबाले भन्नु भयो ।
पठाइदिऊँ कि नपठाइदिऊँ धर्मसंकट !
सरकारले लकडाउनको अवधिमा सर्वसाधारणलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा आवतजावत गर्न प्रतिबन्ध लगएको छ । तर दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदूरहरू सयौंको संख्यामा बीपी र पृथ्वी राजमार्ग हुँदै काठमाडौंबाट बाहिरिएका छन् ।
सुख्खा चिउरा र चाउचाउको भरमा पैदलै हिडेर लामो यात्रा गरिरहेका यात्रुहरू थ’काइले ल’खतरान परेका छन् । कोही विरामी पर्न थालेका छन् । कोहीको खुट्टा फु’टेर र’गत आएको छ । कोही खो’च्याइखोच्याइ हिँडेका छन् । कोही चर्को गर्मीले बेहोस् हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।
“गाडीमा पठायो भन्नुभयो कसैले किन पठाएको भन्छन, नपठाउँ राजमार्गमा अ’लपत्र पर्दा पनि प्रहरीले केही गरेन भन्छन,” वाइबाले गुनासो गर्नु भयो, “हाम्रो क्षेत्रका सर्वसाधारणलाई लकडाउनको पालना गर्न घरबाट बाहिर निस्कन दिएका छैनौं । राजमार्गमा अलपत्र परेकाहरूलाई जिल्लासँग समन्वय गरेर सकेसम्म उ’द्धार गरेका छौं ।”
सिन्धुली जिल्लाका प्रहरी प्रमुखको निर्देशन र सुझावमा अलपत्र पैदल यात्रुको उद्धार गरेको वाइबाले वताउनु भयो ।
“हाम्रो इलाकाका स्थानीयलाई पनि घर बाहिर निस्कन दिनु भएन त । अन्य जिल्लाबाट हिँड्दै यहाँसम्म आइपुगेका र प्रहरीको सहयोग मागेकालाई यत्तिकै अ’लपत्र पार्न त भएन नि !” उहाँले थप्नु भयो ।
बीपी राजमार्गको सबभन्दा धेरै खण्ड सिन्धुलीमा पर्छ । व्यस्त उक्त राजमार्गको धेरै खण्ड खुर्कोट प्रहरीले हेर्छ । इलाका प्रहरी कार्यालयले बीपी राजमार्गको ७२ किलोमिटर हेर्छ ।
प्रदेश नम्बर १ का सबै जिल्ला तथा प्रदेश नम्बर २ का सप्तरी, सिरहा, महोत्तरी, धनुषा लगायतका जिल्लाका काठमाडौंमा रहेका मजदुरहरू लकडाउनपछि यही बाटो भएर तराई झरेका छन् ।
“गोलन्जोर गाउँपालिकाले फोहोर बोक्न टिप्पर किनेको रहेछ । अहिले राजमार्गमा हिँडन नसकेर अ’लपत्र परेका यात्रुलाई त्यही टिप्परमा बसाएर पठाइदिने गरेका छौं, अरू जे भेटिन्छन् त्यही गाडीमा पठाएका छौं,’ उहाँले भन्नु भयो ।
बिहीवार सिन्धुलीकी प्रहरी प्रमुख एसपी रञ्जु सिग्देलले सिद्धबाबा माविको स्कूल बस पठाइदिएपछि त्यसमा केही यात्रुको उद्धार गरिएको वाइबाले बताउनु भयोनु भयो । नेपालथोक र खुर्कोटमा पैदलयात्रुको ज्वरो नापेर मात्र उनीहरूलाई गन्तव्यतर्फ पठाउने काम भइरहेको छ ।
अत्यावश्यक खाद्य सामाग्री, एम्बुलेन्स र सूचना विभागको परिचयपत्र भएका पत्रकार सवार प्रेसका गाडी बाहेक अन्य सवारीलाई बीपी राजमार्गमा पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको उहाँले बताउनु भयो ।
“कोही–कोही हाम्रो प्रहरीलाई छक्काउँदै ट्याक्सी लिएर पनि आउनु भएको पाइयो । उनीहरूलाई सम्झाएर जताबाट आएको हो उतै पठाउने काम गरेका छौं,’ उहाँले भन्नु भयो ।
काठमाडौंमा पैसा र खानेकुरा सकिएपछि पैदल आफ्नो जन्मथलो हिँडेकाको पीडा बुझेर उनीहरूलाई खाने कुराको समेत बन्दोबस्त गरिएको उहाँले जानकारी दिनु भयो ।
‘पैदल हिँड्दै आउनुभएका नागरिक हाम्रो इलाकाका प्रहरी कार्यालयमा पुगेर सहयोग माग्नुहुन्छ, कतिपयले मलाई फोन गरेर पनि सहयोग माग्नुहुन्छ,’ उहाँले थपनु भयो, “शुरूमा हाम्रा साथीहरूले घरघरै केही मागेर ती पैदलयात्रुलाई खाने कुरा दिनुभएछ ।
मैले थाहा पाएपछि यो त भएन भन्ने लाग्यो । त्यसैले स्थानीय व्यापारी, खाद्य स्टोर सञ्चालक, वडा प्रतिनिधि र समाजसेवीसँग समन्वय गरेर खाद्य सामग्री जुटाएका छौं, गाडीमा र्पुयाइदिनेसँग खान पनि दिने गरेका छौं ।’
राजमार्गमा अलपत्र यात्रुको उद्धारमा गम्भीर छौं : दीपा बोहोरा
बीपी राजमार्ग भएर नेपालथोक आउने यात्रुलाई सीडीओ, एसपी र इलाका प्रहरी कार्यालय खुर्कोटसँग समन्वय गरेर जिल्ला कटाइदिने गरेको सुनकोशी गाउँपालिकाकी अध्यक्ष दीपा बोहोरा दाहालले बताउनु भयोनु भयो ।
“लकडाउन शुरू भएपछि अस्ति (बुधवार)सम्म ६ हजार ७ सय ८७ जनालाई उद्धार गरेर गन्तव्यसम्म पठाइदिएका छौं । हिजो र आजपनि संख्या उत्तिकै छ । अहिलेसम्म सात हजारभन्दा बढीको उद्धार गरिसक्यौं,” अध्यक्ष बोहोराले शुक्रवार भन्नुभयो, “आजपनि ३ वटा टिप्पर, २ वटा मिनीट्रक र गाउँपालिकाको गाडीमा यात्रुलाई खुर्कोटसम्म पठाएका छौं, म अहिले पनि सडकमै छु ।”
“खुर्कोटसम्म पठाएपछि अर्को गाउँपालिकाले प्रहरीसँग समन्वय गरेर पठाउँछ । स्थानीय समाजसेवी दाजुहरूका गाडी निःशुल्क प्रयोग गरेर खुर्कोट र घुर्मीसम्म पठाएका छौं,’ अध्यक्ष बोहोराले थप्नु भयो ।
’अब त बाँचिने भयो, घर आइपुगेजस्तै भयो’
काठमाडौंबाट रातदिन हिँडेर नेपालथोक पुगेका ओखलढुंगा मानेभञ्जाङ ३ का लालबहादुर राई प्रहरीले गाडीमा उ’द्धार गरेपछि हर्षित देखिए ।
“बुधवार बिहान ३ बजे उठेर हिडेको थिएँ । राति २ घण्टा आराम गरेपछि फेरि हिँड्न शुरू गरेँ र आज दिउँसो ३ बजे नेपालथोक आइपुगेको थिएँ, प्रहरीले उद्धार र्गयो । अब त घर पुगिने भैयो,’ राईले प्रहरीलाई धन्वयाद दिँदै बताउनु भयो ।
रामेछाप वसन्तपुरका विष्णु–पवित्रा थापाको परिवारमा पनि प्रहरीले उद्धार गरेपछि गन्तव्यमा पुगिने विश्वास जागेको छ । “ललितपुर गोदावरीमा मजदूरी काम गर्दै आएका थियौं, पैसा सकिएपछि घर हिँडेका हौं । बीच बाटोमा नानी हिँड्न नसक्दा नेपालथोकसम्म आउन ३ दिन लाग्यो,” छोरीलाई गाडीमा राख्दै थापाले भन्नुभयो, “अब त घर पुगिने भैयो ।”
हिँड्दाहिँड्दै थाकेका, सरकारलाई गाली गरिरहेका मजदुरहरू प्रहरी र स्थानीय सरकारले गाडी जुटाएर गन्तव्यमा पठाइदिएपछि चाहिँ सरकारसँग खुशी भएका देखिन्थे ।
“कति त हाम्रो कार्यालय भित्रै आउनुहुन्छ, खान पाइएन । हिँड्न सकिएन भन्नुहुन्छ,” इन्सपेक्टर वाइबाले भन्नुभयो, “जब हामी खानेकुरा दिन्छौं र गाडीमा चढाएर गन्तव्यतर्फ पठाइदिन्छौं, उहाँहरू एकदमै खुशी देखिनुहुन्छ ।”
खानेकुरा र गाडी चढ्न पाएपछि सरकारले दुःख परेका बेला हेर्दो रहेछ भन्नुभयोर प्रतिक्रिया दिएको आफूले सुनेको वाइबाले बताउनु भयो ।
उहाँले नेपालथोकसम्म आइपुग्ने पैदल यात्रुको उद्धारमा निरन्तर लागिरहने योजना पनि सुनाउनु भयो ।
सवारी पास नलिई नहिँड्न र प्रहरीलाई छक्काएर उम्कन सक्छु भन्नुभयोर नसोच्न उहाँले सम्बन्धित यात्रुलाई आग्रह गर्नु भयो ।
Prevट्रम्प भन्छन् अब कोरोना निको पार्ने औसधि बनिसक्यो
Nextश्रीमानले पि’टेर भागेपछी लक डाउनमा आमा छोरीको यस्तो बिचल्ली, मनै रुवाउने भिडियो हेर्नुस
६ जुवाडे जुवाको खालबाटै पक्राउ